ဒီအချက် (၇) ချက် ယောင်း သူငယ်ချင်းမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သူက ယောင်းရဲ့ Partner in Crime ပဲ!!! - For her Myanmar
တိုက်ဆိုင်တာတွေ ရှိရင် မန်းရှင်းခေါ်သွားလိုက်ပါဦး 😛
ရည်းစားရှိတာ၊ bff ရှိတာဟုတ်ပါပြီ။ Partner in crime ရော ရှိပြီလားယောင်းတို့? Partner in crime ဆိုတာကို အက်ဒ်မင်နားလည်သလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရရင်တော့ “အကြံတူ၊ အကျင့်တူ မျောက်လောင်းတွေ”ပါ 😛 … Partners in crime ဆိုတာ သူငယ်ချင်းမှ မဟုတ်ဘူးနော်။ တချို့ဆို ချစ်သူ ဖြစ်နေတာမျိုး၊ မောင်နှမ ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ့် Partner in Crime ကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ? လွယ်ပါတယ်.. သူတို့မှာ ဒီလက္ခဏာတွေ ရှိမရှိ အကဲခတ်လိုက်ပါ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြံချင်းတူ၊ စိတ်ချင်းတူတာမို့လည်း Partners in crime ဖြစ်လာတာပါ။ ကိုယ်က မိုးရေထဲ ရေချိုးရတာကြိုက်ရင် သူလည်းကြိုက်တာမျိုး၊ ဆောင်းတွင်းပိုင်းမှာ ရေခဲချောင်းစားရတာ ကြိုက်တာချင်း တူနေတာမျိုး က Partners in crime တွေကြားမှာ သာမန်အခြေအနေမျိုးတွေပါ။ ကံမကောင်းရင် ခရက်ရ်ှတောင် တူနေတတ်ပါတယ်.. (သတိထားကြဖို့ 😛 )
သူ့မှာလည်း ကိုယ့်အကျင့်တွေရှိနေတာမို့ ကိုယ့်အကြောင်း ပိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်။ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာ တခြားသူတွေ ကိုယ့်ဘက်မရှိနေပေမဲ့လည်း Partner in Crime ကတော့ အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်မှာပါပဲ။
Related Article >>> ခရီးသွားဖို့ကြံစည်လိုက်တိုင်း ဂျင်းထည့်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုအပီချုပ်မလဲ
၃။ ထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရတွေရှိတတ်တယ်။
အိမ်ကမသိအောင် ခရီး ခိုးထွက်ကြတာမျိုး၊ ကြည့်မရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အနိုင်ကျင့်ဖူးတာမျိုး၊ စာမေးပွဲတူတူကျလို့ အောင်ပွဲခံတာမျိုးတွေက ကြောင်တောင်တောင်ဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေပေမဲ့ Partners in crime တွေကြားမှာတော့ ပြန်တွေးတိုင်း တသသဖြစ်နေရမယ့် အမှတ်တရလေးတွေပါ။
ရည်းစားနဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တည့်ချင်မှလည်း တည့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ partners in crime တွေကြားမှာ စိတ်ကောက်တယ်၊ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးက သိပ်ရှားပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း မကြာဘူးရယ်… ခဏချင်း ဟီးဟီးဟားဟား ဖြစ်ပြီး ပြန်ပြေလည်သွားတာမျိုး..
၅။ ကြည့်မရတာချင်း တူတယ်။
ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်မရဘူးဆို ကိုယ့်partner in crime ကို မေးကြည့်။ သေချာပေါက်သူလည်း ကြည့်မရပါဘူး။ တစ်ခါတလေ သူက ပိုပြီး ကြည့်လို့ မရနေတာမျိုးတောင် ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အဲ့တော့လည်း နှစ်ယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး တွတ်ထိုးလို့ ရတာပေါ့ 😛
တစ်ယောက်က ပေါက်တတ်ကရ လုပ်တော့မယ်ဆို နောက်တစ်ယောက်ကပါ အလိုတူ၊အလိုပါ လိုက်လုပ်တာမျိုး… ဥပမာ – မိုးရွာထဲထီးမဆောင်းဘဲ လျှောက်ဆော့တာမျိုး၊ ဌာနမှူးဆီ ဒရာမာ ခင်းပြီး ကျောင်းအပြင်ထွက်ဖို့ ခွင့်ယူတာမျိုး (ဒါတော့ YUFL ကျောင်းသူတွေပဲသိတယ် :P) ၊ အတွဲခိုးချောင်းတာ၊ ကောင်လေးတွေကို လိုက်စတာ စသဖြင့် ပေါက်တီးပေါက်ရှာ ကိစ္စတွေကို တိုင်ပင်စရာမလိုဘဲ အကြည့်နဲ့တင် သဘောပေါက်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Partners in Crime ဆိုပြီး ဖြစ်နေကြတာပေါ့..
၇။ လက်တွဲမြဲတယ်။ ယုံကြည်မှု ခိုင်မာတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်ပေးတာ၊ ကူညီပေးတာကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို မေ့သွားတာ၊ ကွဲသွားတာမျိုးမရှိကြပါဘူး။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဝေးမှာရောက်နေရင်တောင် အင်တာနက်ထက်မြန်တဲ့ အလျင်နှုန်းထက် ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် အချင်းချင်း အစီရင်ခံနေပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။ နောက်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုကလည်း သြချစရာပါပဲ… ကိုယ့်ရဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အတွင်းကိစ္စတွေကအစ ဖွင့်ဟ တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးထိ ယုံကြည်ထားကြတာမျိုးပါ။
ကဲ.. ဘာလုပ်နေတာလဲ? ကိုယ့် Partner in Crimes လေးတွေကို မန်းရှင်းခေါ်သွားလိုက်တော့လေ…
တိုကျဆိုငျတာတှေ ရှိရငျ မနျးရှငျးချေါသှားလိုကျပါဦး 😛
ရညျးစားရှိတာ၊ bff ရှိတာဟုတျပါပွီ။ Partner in crime ရော ရှိပွီလားယောငျးတို့? Partner in crime ဆိုတာကို အကျဒျမငျနားလညျသလို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ရရငျတော့ “အကွံတူ၊ အကငျြ့တူ မြောကျလောငျးတှေ”ပါ 😛 … Partners in crime ဆိုတာ သူငယျခငျြးမှ မဟုတျဘူးနျော။ တခြို့ဆို ခဈြသူ ဖွဈနတောမြိုး၊ မောငျနှမ ဖွဈနတောမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါဆို ကိုယျ့ Partner in Crime ကို ဘယျလို သိနိုငျမလဲ? လှယျပါတယျ.. သူတို့မှာ ဒီလက်ခဏာတှေ ရှိမရှိ အကဲခတျလိုကျပါ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အကွံခငျြးတူ၊ စိတျခငျြးတူတာမို့လညျး Partners in crime ဖွဈလာတာပါ။ ကိုယျက မိုးရထေဲ ရခြေိုးရတာကွိုကျရငျ သူလညျးကွိုကျတာမြိုး၊ ဆောငျးတှငျးပိုငျးမှာ ရခေဲခြောငျးစားရတာ ကွိုကျတာခငျြး တူနတောမြိုး က Partners in crime တှကွေားမှာ သာမနျအခွအေနမြေိုးတှပေါ။ ကံမကောငျးရငျ ခရကျရျှတောငျ တူနတေတျပါတယျ.. (သတိထားကွဖို့ 😛 )
သူ့မှာလညျး ကိုယျ့အကငျြ့တှရှေိနတောမို့ ကိုယျ့အကွောငျး ပိုနားလညျပေးနိုငျတယျ။ နားလညျဖို့ ခကျခဲတဲ့အခွအေနမှော တခွားသူတှေ ကိုယျ့ဘကျမရှိနပေမေဲ့လညျး Partner in Crime ကတော့ အမွဲတမျးကိုယျ့ဘကျမှာပါပဲ။
Related Article >>> ခရီးသှားဖို့ကွံစညျလိုကျတိုငျး ဂငျြးထညျ့တတျတဲ့ သူငယျခငျြးကို ဘယျလိုအပီခြုပျမလဲ
၃။ ထူးခွားတဲ့ အမှတျတရတှရှေိတတျတယျ။
အိမျကမသိအောငျ ခရီး ခိုးထှကျကွတာမြိုး၊ ကွညျ့မရတဲ့ လူတဈယောကျကို နှဈယောကျပေါငျးပွီး အနိုငျကငျြ့ဖူးတာမြိုး၊ စာမေးပှဲတူတူကလြို့ အောငျပှဲခံတာမြိုးတှကေ ကွောငျတောငျတောငျဆနျတဲ့လုပျရပျတှပေမေဲ့ Partners in crime တှကွေားမှာတော့ ပွနျတှေးတိုငျး တသသဖွဈနရေမယျ့ အမှတျတရလေးတှပေါ။
ရညျးစားနဲ့ ရနျဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တညျ့ခငျြမှလညျး တညျ့မယျ၊ ဒါပမေဲ့ partners in crime တှကွေားမှာ စိတျကောကျတယျ၊ ရနျဖွဈတယျဆိုတာမြိုးက သိပျရှားပါတယျ။ ဖွဈခဲ့ရငျလညျး မကွာဘူးရယျ… ခဏခငျြး ဟီးဟီးဟားဟား ဖွဈပွီး ပွနျပွလေညျသှားတာမြိုး..
၅။ ကွညျ့မရတာခငျြး တူတယျ။
ကိုယျက လူတဈယောကျကို ကွညျ့မရဘူးဆို ကိုယျ့partner in crime ကို မေးကွညျ့။ သခြောပေါကျသူလညျး ကွညျ့မရပါဘူး။ တဈခါတလေ သူက ပိုပွီး ကွညျ့လို့ မရနတောမြိုးတောငျ ဖွဈတတျပါသေးတယျ။ အဲ့တော့လညျး နှဈယောကျသား ခေါငျးခငျြးဆိုငျပွီး တှတျထိုးလို့ ရတာပေါ့ 😛
တဈယောကျက ပေါကျတတျကရ လုပျတော့မယျဆို နောကျတဈယောကျကပါ အလိုတူ၊အလိုပါ လိုကျလုပျတာမြိုး… ဥပမာ – မိုးရှာထဲထီးမဆောငျးဘဲ လြှောကျဆော့တာမြိုး၊ ဌာနမှူးဆီ ဒရာမာ ခငျးပွီး ကြောငျးအပွငျထှကျဖို့ ခှငျ့ယူတာမြိုး (ဒါတော့ YUFL ကြောငျးသူတှပေဲသိတယျ :P) ၊ အတှဲခိုးခြောငျးတာ၊ ကောငျလေးတှကေို လိုကျစတာ စသဖွငျ့ ပေါကျတီးပေါကျရှာ ကိစ်စတှကေို တိုငျပငျစရာမလိုဘဲ အကွညျ့နဲ့တငျ သဘောပေါကျကွသူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့လညျး Partners in Crime ဆိုပွီး ဖွဈနကွေတာပေါ့..
၇။ လကျတှဲမွဲတယျ။ ယုံကွညျမှု ခိုငျမာတယျ။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျပေးတာ၊ ကူညီပေးတာကွောငျ့ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို မသှေ့ားတာ၊ ကှဲသှားတာမြိုးမရှိကွပါဘူး။ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ အဝေးမှာရောကျနရေငျတောငျ အငျတာနကျထကျမွနျတဲ့ အလငျြနှုနျးထကျ ကိုယျ့အခွအေနကေိုယျ အခငျြးခငျြး အစီရငျခံနပွေီးသား ဖွဈနမှောပါ။ နောကျပွီး တဈယောကျကို တဈယောကျ ယုံကွညျမှုကလညျး သွခစြရာပါပဲ… ကိုယျ့ရဲ့ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျ အတှငျးကိစ်စတှကေအစ ဖှငျ့ဟ တိုငျပငျလို့ရတဲ့ အနအေထားမြိုးထိ ယုံကွညျထားကွတာမြိုးပါ။
ကဲ.. ဘာလုပျနတောလဲ? ကိုယျ့ Partner in Crimes လေးတှကေို မနျးရှငျးချေါသှားလိုကျတော့လေ…
Tags: bff, Friendship, Fun, Mind, Partner in Crime, Partners, Soul, Trust